लज्जित भएपछि बल्ल ऐश्वर्याले यसरी रोजिन् अभिषेकलाई – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/लज्जित भएपछि बल्ल ऐश्वर्याले यसरी रोजिन् अभिषेकलाई
2,0412minutes read
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा विश्वसुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चन सन् १९७३ नेभेम्बर १ मा भारतको कर्नाटकामा जन्मिएकी हुन् । ऐश्वर्या रायले अभिषेक बच्चनसँग विवाह गरिसकेकी छन् तर धेरै वर्ष अघि उनी खान वा ओबेराय हुन पुगेकी थिइन, तर यस्तो हुन सकेन। ऐश्वर्या र सलमान खानको अफेयरको समाचार नयाँ होइन तर सलमानसँग हैरान भएर ऐश्वर्याले विवेकको हात समातेकी थिइन् । पछि विवेकलाई पनि एशले छोडिदिइन् ।
विवेक ओबेरायलाई बलिउडमा लामो दौडको घोडा मानिन्थ्यो। विवेकले आफ्नो क्यारियरमा एक से एक भुमिका निभाए , उनको फ्यान फलोईपनि राम्रो थियो तर केही गल्तीले उनको क्यारियरलाई डुबायो । विवेक एक राम्रो कलाकार भएता पनि फिल्म उद्योगमा धेरै नाम कमाउन सकेनन् । धेरैको विश्वास छ कि यसको पछाडि ऐश्वर्या रायसँगको सम्बन्ध र सलमान खानसँग दुश्मनी रहेको छ।
ऐश्वर्या सलमान खानसँग सम्बन्धमा हुनु अघि उनी राजीव मूलचन्दानीकी प्रेमिका थिइन्। दुबै मोडलिंगको दिनमा नजिक भएका थिए सो समय ऐश्वर्या त्यति लोकप्रिय पनि थिइनन्। यद्यपि यो सम्बन्ध राम्रोसँग चलेन र एशले राजीवलाई छोडेर अगाडि बढिन्। ऐश र सलमानले ‘हम दिल दे चुके सनम’ को सेटमा भेटे र उनीहरूको प्रेम त्यहाँबाट बढ्न सुरु भयो । १९९९ देखि २००१ सम्म दुवैले एक अर्कालाई डेट गरे तर सलमानको एउटा कुराले सबै चीज बिगार्‍यो। एशले यस सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नु राम्रो सम्झिन् । तर सम्बन्ध त्यति सजिलै अन्त हुन सकेन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
ऐशबाट अलग भएका सलमानले आफ्नो रिसलाई वशमा राख्न सकेनन्। ऐश फिल्मको शुटिङमा व्यस्त हुन्थिन् र सलमान त्यहाँ पुग्दा हंगामा गर्थे। यसै कारणले एशलाई धेरै नोक्सान भयो । चलचित्र ‘चलते चलते’को सेटमा सलमानको रिसको कारण शाहरुखले ऐशलाई फिल्मबाट हटाए। सलमानको यस्तो मनोवृत्तिले एशलाई लाजमर्दो बनायो। २००२ मा एक अंग्रेजी अखबारलाई दिइएको एक अन्तर्वार्तामा एशले भनेकी थिइन् ,’म र सलमान मार्चमा अलग भयौ , तर उनी अझै पनि यो कुरालाई विश्वास गर्न सकि रहेका छैनन्। ब्रेकअप पछि उनि मलाई फोन गर्थे र गाली गर्थे ।’
एशले भनेकी थिईन्, ‘उनले मलाई शंका पनि गरे कि मेरो कोस्टारसँग मेरो सम्बन्ध छ भनेर । त्यस्तो पनि समय थियो उनले ममाथि हात उठाए, यो राम्रो थियो कि त्यहाँ कुनै निशानहरू थिएनन्। यसको बाबजुद पनि, म मेरो काममा जान्थे जस्तो कि केही भएको छैन।’
ऐश सलमानबाट टाढा हुने बित्तिकै, विवेक ओबेरॉय उनको जीवनमा आए । सलमानसँग रिसाएकी ऐशलाई विवेकले माया गर्न थाले । दुवैले चलचित्र ‘क‍यो हो गया ना’ मा सँगै काम गर्दा एक अर्कालाई माया महसुस गरे। विवेकले एशलाई उनलाई ३० औ जन्मदिनमा ३० वटा उपहार पनि दिए।
यद्यपि ऐशले विवेकसँग सम्बन्ध रहेको कुरा कहिल्यै खुलेआम भनिन्, उनी विवेकसँगै हरेक समारोहमा साथ पुग्थिइन् । यसबाटै बुझ्न सकिन्थ्यो कि ती दुई बीच केहि चलिरहेको छ। त्यो अवस्थामा, विवेकको त्यो एउटा कदमले सबै कुरा परिवर्तन गर्‍यो। विवेक चाहन्थे कि नराम्रो समयबाट गुज्री रहेकी एशको लागि उनि सधै उपस्थित हौ, तर यसको विपरीत भयो। विवेकले एक होटलको कोठामा प्रेस सम्मेलन गरेर उनले उनलाई सलमानबाट मार्ने धम्की दिने कलहरू आएको बताए । यस सम्मेलनले कसैको भलाई गर्नुको सट्टा विवेकको नै हानी गर्‍यो ।
भाग्य हेर्नुहोस्, जसको लागि विवेकले यति ठूलो कदम उठाए, उनले पनि उनलाई छोडिदिइन्। एशलेपछि यो स्पष्ट गरिन् कि उनलाई यी सबै चीजहरूसँग केही लिनुदिनु छैन र विवेकबाट टाढा रहिन् । ऐशसँगै, विवेकको फिल्महरूको प्रस्ताव पनि उनको हातबाट खोसिन थाल्यो ।विवेकले त्यो गल्ती नगरेको भए सायद आज उनीसँग एश हुने थिइन् र उनको करियर पनि राम्रो चलिरहेको हुने थियो । दुई पटक प्रेममा लज्जित बनेकी एश अभिषेक बच्चनको साथ भेटाउदा सुरक्षित महसुस गरिन् ।
ऐश र अभिषेकले ‘ढाई अक्षर प्रेम के’, ‘कुछ ना कहो’, ‘गुरु’ र ‘उमराव जान’ फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए। यो मानिन्छ कि उमराव जानमा काम गर्ने बित्तिकै उनीहरूको निकटता बढेको थियो र टोरोन्टोमा गुरुको प्रीमियरपछि अभिषेकले राखेकोलाई प्रस्तावलाई ऐशले तुरुन्तै स्वीकारेकी थिइन् । अन्तमा धेरै उतार चढावहरूपछि,एशले अभिषेकसँग २० अप्रिल २००७ मा विवाह गरिन् । २०११ मा दुबै छोरी आराध्या भइन्। त्यसबेलादेखि एश आफ्नो विवाहित जीवनमा धेरै खुसी छिन् र सबै पुरानो कुराहरु तिलन्जली दिइसकेकी छन् ।
अब जापानमा श्रमिकले ५ वर्षभन्दा बढी समय काम गर्न पाउने
भोकका कारण कं’कालजस्तै भइसकेका ७ वर्षका बालक ग’म्भीर अ’वस्थामा भेटिएपछि !
परिक्षाको तयारी गरिरहेका कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुलाइ एकाविहानै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
गुल्मीमा झा`रफु`कको नाममा वृद्धले गु`माए ज्या`न यस्तो छ ना`लिबे`ली !